इजरायलमा १२ वर्ष शासन गर्ने बेन्जामिनलाई बिस्थापित गर्ने प्रधानमन्त्री नेफ्टाली को हुन् ? - Samadhan News
इजरायलमा १२ वर्ष शासन गर्ने बेन्जामिनलाई बिस्थापित गर्ने प्रधानमन्त्री नेफ्टाली को हुन् ?
समाधान संवाददाता २०७८ जेठ ३१ गते १२:२८
३१ जेठ, पोखरा। इजरायलमा १२ वर्षपछि बेन्जामिन नेतान्याहूलाई सत्ताबाट हटाउँदै नेफ्टाली बेनेट प्रधानमन्त्री बनेका छन् । पछिल्लोपटक भएको आम निर्वाचनमा बेनेटको यामिना पार्टी पाँचौं स्थानमा थियो । तर, नेतान्याहूको पार्टी पहिलो भएको थियो । यद्यपि बेनेट नेतान्याहूलाई हटाउँदै आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन जुटाउन सफल भए ।
यससँगै नेतान्याहू इजरायलको प्रधानमन्त्री पदबाट बिदा भएका छन् । इजरायलका आठ पार्टीहरुले नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार बनाएका हुन् । यद्यपि आठ पार्टी मिल्दा पनि निकै झिनो अन्तरको बहुमत नयाँ सरकारलाई छ । त्यसैले अन्तिम समयसम्म पनि नेतान्याहूले हार भने मानेका थिएनन् । बुधबार संसद्मा भएको निर्वाचनमा नेतान्याहूको पक्षमा ५९ मत खस्दा बेनेटले उनको भन्दा एक मत बढी पाएका थिए ।
नेफ्टाली बेनेटको यामिना पार्टीको संसद्मा केवल सात सिट छ । उनको पार्टी पनि संसद्मा पाँचौं स्थानमा छ । तर, बेनेट दुवै पक्षको लागि निकै महत्वपूर्ण थिए । त्यसैले उनले प्रधानमन्त्री पद पाएका हुन् । यामिना पार्टीका साथै अन्य तीन पार्टीको पनि समान सात सिट छ ।
प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच बस्ती निर्धारण सबैभन्दा विवादित मुद्दा हो । प्यालेस्टाइनियनहरु यी बस्तीबाट यहुदीलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् र उनीहरु वेस्ट बैंक, गाजासहितको एक स्वतन्त्र मुलुकको माग गर्दै आएका छन् । यसको राजधानी पुर्वी जेरुसलेम हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
यो भिडियोमा बेनेटले दुवै अखारको खिल्ली उडाउँदै सरी सरी’ भनेका थिए । भिडियोको अन्तिममा उनले अब माफी माग्न छाड्ने घोषणा गरेका थिए ।